Ekpere Santa Muerte maka ịhụnanya na -agaghị ekwe omume. ? + Irè
EKPERE EKPERE MAKA EGO EGO Nwere ike ibi ndụ ihunanya ahụ ịchọrọ nke ukwuu ma ọ bụ weta onye ahụ pụrụ iche nke kewapụrụ ihe ụfọdụ ma ọ bụ ihe ọzọ.
Nwere ike ịtụkwasị obi na Saint a nwere ngwa ọrụ dị mkpa iji merie ihe anyị na-ejighị ya kpọrọ.
O nwere ike inye ndụ mmụọ ma ọ bụ mee ka ọ pụta na obi ndị kachasị kpọrọ nkụ ma dị adị.
1 Kedu ihe bụ Ekpere Santa Muerte maka ịhụnanya na-agaghị ekwe omume?
1.1 EKPERE EKPERE MAKA EGO EGO
2 Ekpere a, ọ dị ike?
Kedu ihe bụ Ekpere Santa Muerte maka ịhụnanya na-agaghị ekwe omume?
na ekpere Ha na-arụ ọrụ maka ihe ọ bụla ịchọrọ ịtụ.
N'okwu a ọ bụ maka nweta ima nke oma.
Onye Okike Chineke Nna n’akuzi anyị site n’akwụkwọ nsọ nke ọ chọrọ inyere onye ọ bụla bịaruru ya nso na anyị nwere ike ịbịaru ya nso site n’ekpere kpere ma ọ bụ onye nsọ ọ bụla.
La Santa Muerte Ọ na-enyere anyị aka n'ihe metụtara obi na mmetụta.
Usedzọ ejiri nye anyị arịrịọ a dị omimi ma ọ bụrụ na amara ha na ha nwere ike dị egwu, ọrụ ebube na-eme ngwa-ngwa.
Oh Ọnwụ Nsọ
ịhụnanya akpọchiela ọnụ ụzọ m, mana ezigbo Santa Muerte,
O mesoro m ihe ike, obi adịghị m mma n'ihi na m hụrụ m n'anya, ọ bụghị m.
Ahụhụ nke enweghị enyemaka na-ejide m mgbe m hụrụ na enweghị m aka iji dozie nsogbu m, m na-arịọ gị nnukwu mwute ka i wee nụ ekpere m, enwere m olileanya na ị ga-ege ntị ma nwee mmetụta ụdị ihe m na-eti mgbe nwa m nwanyị ọcha na-ekwu okwu. onye m huru n'anya bu ihunanya na-apughi ime eme mana ichoro ka mu na oru ebube di ya n’akuku, na o kari ike mere na abiakute m na inwee obi oma na oru ebube.
Achọrọ m ka onye ahụ bụrụ onye mụ na ya ga-ekerịta ma gosipụtaghachi ya n'ịhụnanya ya niile, m ga-ekele gị, site na ya, abụ m onye kwere ekwe nke okwukwe gị.
Aga m arịọ gị maka oge a ga-eji rịọ arịrịọ m ka m na-eche mgbe m na-eche, m ga-egosipụta iguzosi ike n'ihe m site n'inye gị onyinye m ogologo oge maka gị Ọnwụ M hụrụ n'anya.
Nwanne, Nwanne nwanyị ọcha, atụkwasara m gị obi ma tinye okwukwe m niile na gị, enwere m olileanya na ị ga-ege m ntị ma mezuo ọchịchọ m. Ka ọ dịrị.
Nke a ekpere maka ịhụnanya Santa Muerte bụ ọrụ ebube!
Hụrụ n’anya ma ghara inyeghachi ya ikike O bu otnime oke nkpagbu ahuhu ahuhu ta abughi na ta ma kamgbe mmalite oge.
Ọtụtụ oge anyị tụkwasịrị onwe anyị obi karịa na ihe dị mma na onye mmekọ anyị ma ọ na-eju anyị anya mgbe anyị funahụrụ ya.
Ọ bụ n’oge ahụ ka ekpere a bụrụ ngwa-ọgụ nzuzo anyị nke nwere ike inyere anyị aka imeri n’agha maka ịhụnanya siri ike, ezi na ndụ.
Ee, ọ dị oke ike, ọkachasị ma ọ bụrụ ejiri okwukwe sitere n'obi mee ya.
Recommendationsfọdụ aro iji mee ka ahịrịokwu a dịkwuo irè wue ebe-ichu-aja puru iche n’ụlọ anyi nke anyị nwere abụọ kandụl na-acha uhie uhie na nke ọcha, a na-acha ọcha na-acha uhie uhie na foto atọ nke onye ị hụrụ n'anya.
I nwekwara ike ide aha onye ozo n’akụkụ nke anyị yana ahịrịokwu pụrụ iche mana ihe kachasị mkpa bụ ikwere mgbe niile.
Kwere mgbe nile na ikike nke ikpegara Ọnwụ Black Black maka ịhụnanya agaghị ekwe omume.
Ekpere siri ike ịkpọ m